Warkii ugu dambeeyay ee Chelsea iyo Gonzalo Higuain….(Sheekada oo gabo gabo ah) – Gool FM
Warkii ugu dambeeyay ee Chelsea iyo Gonzalo Higuain….(Sheekada oo gabo gabo ah)
(London) 23 Dis 2018. Sheekada Chelsea iyo dhaliyaha Milan ee Gonzalo Higuain ayaa lagu waramayaa inay soo gaartay gabo gabo oo ay u badan tahay inuu laacibka soo cago dhigan doono Stamford Bridge bisha Janaayo marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub.
Jariiradda caanka ah ee The Telegraph ayaa hoosta ka xariiqday in Blues ay qarka u saaran tahay inay gacanta ku dhigo weeraryahanka kooxda Juventus ee amaahda ku jooga Milan.
Wuxuu intaa ku daray in Chelsea ay wada hadalo la yeelatay labada koox ee reer Talyaani oo ku aadan sidii ay heshiis amaah ah inta ka harsan kal ciyaareedka ugu qaadan lahayd xiddiga reer Argentina.
Higuain ayaa maah ku jooga Milan balse qandaraas kula jira kooxda Juventus.
Milan oo la dhibtooneysa xeerka dhaqaalo wanaaga ayaa la sheegayaa inay dooneyso inay Higuain u ogolaato inuu ku biiro Chelsea, waayo waxaa u baaqan doona 8-milyan haddii uu laacibka ku biiro kooxda reer England.
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa furmi doona 1-da bisha soo socota ee Janaayo isagoona xirmi doona 31-da bisha waxayna u badan tahay in Higuain uu ku soo biiri doono Blues maadaama ay kooxdu ka go’an tahay sidii ay ku heli lahayd weeraryahan Cusub waayo waxaa ka fashilmay weeraryahanadooda Morata iyo Giroud.
Warar aan la isku haleen karin ayaa iyaguna tibaaxaya in Morata uu isna dhinaca kale aadi doono oo uu ku biiri doono Milan.
"Waan Ogahay inaad sugeysaan wax ku saabsan Mourinho.....!!".- Pogba oo markii ugu horreysay ka hadlay Ceyrinta Jose Mourinho